Nhau - Saka iwe unotonga sei kunaka kwekukiya zvigunwe ipapo kana uchinge wazvitenga?
Saka iwe unotonga sei kunaka kwekukiya zvigunwe ipapo paunotenga?
(1) Yeresa kutanga
Iwo makiyi ezvigunwe zvevagadziri venguva dzose anowanzo gadzirwa zinc alloy.Huremu hwekiyi yeminwe yechinhu ichi yakakura, saka inorema kuyera.Makiyi emunwe anowanzo kudarika mapaundi masere, uye mamwe anogona kusvika makirogiramu gumi.Ehe, hazvireve kuti makiyi ese ezvigunwe anogadzirwa ne zinc alloy, iyo inofanirwa kutariswa zvakanyanya kana uchitenga.
(2) Tarisa magadzirirwo acho
Iwo makiyi ezvigunwe zvevagadziri venguva dzose vane hunyanzvi hwekuita, uye vamwe vanotoshandisa iyo IML maitiro.Muchidimbu, vanotaridzika vakanaka kwazvo, uye vakatsetseka kusvika pakubata, uye hapazove nekupenengura pendi.Iko kushandiswa kwezvinhu kuchapfuurawo bvunzo, saka iwe unogona zvakare kutarisa skrini (kana mhando yekuratidzira isiri yakakwira, ichave isina kujeka), musoro wezvigunwe (mazhinji emisoro yeminwe inoshandisa semiconductors), bhatiri (the bhatiri rinogonawo kutarisa maparameter akakodzera uye magadzirirwo), nezvimwewo Mira.
(3) Tarisa kuvhiya
Iwo makiyi ezvigunwe zvevagadziri venguva dzose haana chete kugadzikana kwakanaka, asiwo yakakwirira kutsetsenura mukushanda.Saka iwe unofanirwa kushanda iyo yekukiya zvigunwe kubva pakutanga kusvika kumagumo kuti uone kana iyo system yakagadziridzwa zvirinani.
(4) Tarisa cylinder yekiyi uye kiyi
Vagadziri venguva dzose vanoshandisa C-level yekuvhara masilinda, saka iwe unogona zvakare kutarisa izvi.
(5) Tarisa basa racho
Kazhinji, kana pasina zvakakosha zvinodiwa (senge networking kana chimwe chinhu), zvinokurudzirwa kuti utenge chivharo chemunwe chine mabasa akareruka, nekuti iyi mhando yekukiya zvigunwe ine mabasa mashoma, asi yakaedzwa zvizere nemusika uye. yakanyatsogadzikana kushandisa;Nezvimiro zvakawandisa, panogona kuve nenjodzi dzakawanda.Asi kuti ungataura sei, izvi zvinoenderanawo nezvido zvevanhu, hazvirevi kuti mamwe mabasa haana kunaka.
(6) Zvakanakisisa kuita bvunzo panzvimbo
Vamwe vagadziri vachange vaine zvine chekuita nehunyanzvi bvunzo maturusi ekuyedza anti-electromagnetic kupindira, yazvino kuwandisa uye zvimwe zviitiko.
(7) Ndokumbira utarise vagadziri venguva dzose
Nekuti vagadziri venguva dzose vanogona kuvimbisa chigadzirwa chemhando uye mushure mekutengesa sevhisi.
(8) Usakara zvekuchipa
Kunyangwe vamwe vagadziri venguva dzose vaine makiyi ezvigunwe zvakachipa, zvinhu zvavo uye zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvakadzimwa, saka kana zvakakunakira iwe, uchiri kufanira kuongorora zvimwe.Nzvimbo zhinji dzine mutengo wakaderera pamusika ndedzemhando yakashata kana kuti hadzina kana mushure mekutengesa sevhisi, izvo zvinoda kutariswa nemunhu wese.
Nguva yekutumira: Mar-26-2022
© Copyright - 2010-2021 : Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa. Featured Products, Sitemap, Sliding Door Replacement Lock, Hotel Drawer, Sliding Glass Door Mubati Nekiyi Kiyi, Yakanakisa Smart Door Lock 2020, Kiya Yegedhi, Magetsi Door Locks Commercial, Zvese Zvigadzirwa